I-Docu-soap endaweni ye-blockbuster: 48fps > UVielhuber uDavid
I-Docu-soap endaweni ye-blockbuster: 48fps12
Imiboniso bhanyabhanya ihlala irekhodwa kwaye idlalwe kwakhona kwizakhelo ezingama-24 ngomzuzwana- kodwa phantse ifomathi yeminyaka eli-100 ubudala "24p" ibonakala ngathi iyaxenga. Ukuthintela iziphumo ebezingalindelekanga ezingaginyisi mathe (umz. Ukujija ngamandla ngexesha leepani zekhamera ezikhawulezayo) yeprojekhthi ye-24fps, umsebenzi wenziwe ixesha elide ekuphindaphindeni inqanaba lesakhelo kwizakhelo ezingama-48 ngomzuzwana nangaphezulu.
Umahluko kufuneka wenziwe phakathi kwamatyala amabini:
Iifilimu ezirekhodwa kwizakhelo ezingama-24 ngomzuzwana kwaye umabonwakude uwaguqula abe ngokulandelelana kwe-60 Hz Oku kwenziwa ngokokubizwa ngokuba kukubala phakathi kwemifanekiso, ngoncedo lwee-algorithms zemathematika ukuba umfanekiso otolikweyo ubalwe phakathi kwemifanekiso emibini yoqobo. Le nkqubo inokucinywa kuzo zonke iitv.
Iifilimu ezirekhodwa ngokuthe ngqo kumgangatho wesakhelo esiphindwe kabini (izakhelo ezingama-48 ngomzuzwana) emva koko zidlalwe kwakhona; Oku kubandakanya, umzekelo, uPeter Jackson "I-Hobbit". UJames Cameron, uvulindlela hayi kuphela kwitekhnoloji ye-cinema ye-3D, usebenza kwinqanaba lesakhelo esiphakamileyo seefreyimu ezingama-60 ngomzuzwana: I-Avatar 2 kufuneka ize kwesi sikhokelo sokwenyani.
Kuzo zombini ezi meko, kwenzeka into engaqhelekanga, into ebizwa ngokuba yisepha opera: Nditsho neyona nto ibiza kakhulu ye-blockbuster ijongeka (ubuncinci kum) njengesepha yexabiso eliphantsi à la "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". Andikwazi ukuqhelana nesingqi esingaqhelekanga kwaphela: Kubonakala ngathi imifanekiso ifuna uhlobo lonxibelelwano. Ubunyani obubonakalayo bufunyenwe buba yintlekele yokonwaba kwefilimu.
Konke oku kunjalo kwiliso lombonisi-abanye abayi kuqaphela isiphumo okanye bakhethe. Kuhleli kubonwa ukuba itekhnoloji entsha iya kubakho kwiiholo zemiboniso bhanya-bhanya naphambi kwesofa ekhaya. Ndinomdla wokubona ukuba uninzi lwabathandi bemiboniso bhanyabhanya baya kulwamkela olu phuculo lutsha (nangokwe-3D) kunye nekamva elizayo.